လုံမငယ်လေးရဲ့ဆိုဒ်လေးပါ: G Talk
Gtalk အတွေးစာသားများ စုစည်းမှု (၁၆)
ကိုရင်တွေခုန်နေတာက ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာပေါ့....။ :P
ရင်ဘတ်ကိုဖိရင် "I LOVE YOU" လို့ အော်တတ်တဲ့ အရုပ်ကလေးတစ်ရုပ်ပါပဲ။
အသက်တစ်ခါရှူလိုက်တိုင်း ငါ့ရင်ထဲမှာ "မင်းကိုချစ်တယ်" လို့ပဲ အော်နေမိတယ်။
ပိုက်ဆံချေးပြီး ပြန်ဆပ်ရန်မလိုသော သူငယ်ချင်းများ အလိုရှိသည်။
မင်းကိုလွမ်းလို့ ကျတဲ့မျက်ရည်တွေကို တမံဆည်လုပ်ပြီး ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်မယ်ဆိုရင် မင်းနေတဲ့အရပ် တစ်သက်လုံး မီးလင်းနေမှာပါ။
Gtalk အတွေးစာသားများစုစည်းမှု (၁၅)
There is only 1 way2say3words4you.
That's "I love you".
ကိုယ်ကလွဲရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ မယူဘူးဆိုတဲ့လူ မဟုတ်ပါဘူး။
ကိုယ့်အားနည်းချက်အားလုံးကို သိသည့်တိုင် ကိုယ့်ကိုရွေးချယ်သူဖြစ်တယ်။
ခွင့်လွှတ်သည်းခံခြင်းတွေဆိုတာ အချစ်မှာ မရှိမဖြစ်တဲ့ အရာတွေဖြစ်တယ်။
တစ်ဖက်သားရဲ့အမှားကို ပြည့်ဝတဲ့သဘောထားနဲ့ ခွင့်လွှတ်သင့်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူဟာ ကိုယ့်ရဲ့ အချစ်ဆုံးသူ ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
အပြုံးတစ်ခုသည် သင့်ရုပ်ကို ပိုမိုလှပလာစေနိုင်သော ငွေမကုန်သည့် နည်းလမ်းတစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။
ခေါင်းငုံ့ မနေပါနဲ့... ညစ်ပတ်နေတဲ့ ရွှံ့နွံတွေပဲ မြင်ရမှာပေါ့...။
ခေါင်းမော့လိုက်မှ... ကောင်းကင်ပေါ်က တလက်လက်တောက်ပနေတဲ့ ကြယ်လေးတွေကို မြင်ရလိမ့်မယ်။
တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်က မျောက်တွေများလေ... လုံးဝကို အငြိမ်မနေဘူး။
သစ်ကိုင်းကူးလိုက်၊ သန်းရှာလိုက်နဲ့၊ အလုပ်ကို ရှုပ်နေတာပဲ။
ဟော... အခုလည်းကြည့်ဦး၊ ဒီစာကို ဖတ်နေပြန်ပြီ။
စိတ်ကူးယဉ်တာ ပိုက်ဆံမပေးရပေမယ့် အဲဒီစိတ်ကူးတွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့တော့ ပိုက်ဆံပေးရတယ်။
U See I See နှစ်ယောက်စီးတော့ ဆိုက္ကားလေးတာပေါ့။
U Say I Say နှစ်ယောက်ဆေးတော့ ပန်းကန်ပြောင်တာပေါ့။
U Know I Know နှစ်ယောက်နိုးတော့ သူခိုးမကပ်တာပေါ့။
U Chat I Chat နှစ်ယောက်ချက်တော့ အမြန်ကျက်တာပေါ့။
မင်းကိုလွမ်းတိုင်းသာ သေနတ်တစ်ချက်ပစ်ရရင် အခုအချိန်ဆို တတိယကမ္ဘာစစ်တောင် ဖြစ်နေလောက်ပြီ....။
မဆုံနိုင်အောင် ဘယ်လောက်ပဲ ဝေးပါစေ...
တကယ်ချစ်ရင် စိတ်ထဲမှာ အမြဲရှိတယ်။
မင်းအတွက်တော့ ငါ့နေရာက အစားထိုးတာလွယ်ပေမယ့် ငါ့အတွက်တော့ မင်းနေရာမှာ မင်းတစ်ယောက်ပဲ အမြဲရှိနေတယ်။
ငါ့ကောင်းကင်မှာ ထွန်းလင်းဖို့အတွက် လမင်းရယ်၊ ကြယ်ရယ် မလိုပါဘူး။
မင်း ပေါက်ကရတွေဟောလို့ ငါအားပေးတဲ့ ဂျာမနီအသင်း စပိန်ကိုရှုံးသွားပြီ။
မင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရောက်လို့ကတော့ ကောက်ညှင်းအစာသွတ်ပြီး ချက်စားပစ်မယ်။ ငါ့အမေက ပင်လယ်စာ မညှီအောင် ချက်တတ်တယ်ကွ။
သို့သော်... သူ့ကို အလွန်ချစ်ပါသည်။
နံပြားဖုတ်နေတဲ့ ကုလားကြီးလက်က အမွှေးတွေနဲ့ တူတယ်တဲ့။
စကားစုလေးက လွယ်သလောက် လိုက်နာဖို့တော့ ခက်ပါတယ်။
မသိမသာ အပြောင်းအလဲတွေကို ဂရုစိုက်မိမယ်ဆိုရင် တကယ်ပြောင်းလဲလာမယ့် အပြောင်းအလဲကြီးမှာ ခံနိုင်ရည် ရှိနိုင်ပါတယ်။
အပူပေးခံထားရတဲ့ ရွှေတွေဟာ အလှဆင်ပစ္စည်းတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။
ပြင်းပြင်းထန်ထန် နန်းဆွဲခံထားရတဲ့ ကြေးတွေဟာ ၀ိုင်ယာကြိုးတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။
ထွင်းထုခံထားရတဲ့ ကျောက်တုံးတွေဟာလည်း ရုပ်တုတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။
ဒါကြောင့် သင့်ဘ၀မှာ နာကျင်ခံစားရမှုတွေ များလာလေ သင့်ရဲ့တန်ဖိုး တက်လာလေပါပဲ။
ဟုတ်ပါတယ်... လုပ်ပါကွယ်... နင်ဘာဖြစ်ဖြစ် ငါချစ်တယ်။
ယုံပါတယ်.. ညာပါကွယ်... နင်လိမ်တာကို ငါသိတယ်။
ဆက်ညာတယ်... ထပ်ခါရယ်... ငါ့ကိုငတုံးလို့ ထင်နေလည်း...
ငါ့ရင်ထဲက အချစ်ကိုတော့ စော်ကားဖို့ နင်မကြိုးစားပါနဲ့။
Gtalk အတွေးစာသားများစုစည်းမှု (၁၃)
ချစ်ကံဆိုးကငါ့ကိုထိုးတယ် ကြိုးဝိုင်းထဲမှာ ဘယ်ညာပြန်လက်သီးချက်တွေနဲ့ ဘယ်ရွာမှာသူကြီးသမက်ဖြစ်မလဲတွေး မြို့သူတောသူ သဘောတူမဲ့သူ အကြောင်းကြားကြပါ ကြော်ငြာမှာလက်ဖက်ထုပ်ထည့်ကှမ်း တော်ရာမှာ သားမက်လုပ်မလို့ပါဗျာ။
Please . . . Wait . . . . My Heart is ♥ ♥♥ ♥ ♥♥ ♥ Loading . . .
█████████████ 80 %
███████████████ 90% Loading . . .
Connection Fails. Try again later
i amaလူချော
and very good စိတ်သဘော
this isatruth ရေမရော
i like the ငှက်ပျော
my friend name is သခေါ (သွားခေါ)
his another name is လေရှော (လောရှည်)
this morning, i awake မနက်အစော
and i eat the ကျောက်ကျော
if you read this words, really really...... you are စောက်ပေါ။
လူ့ဘ၀မှာ နေပျော်ဖို့ရာ လွယ်ပါတယ်။
တန်ဖိုးထားတတ်၊ ကိုယ်ချင်းစာတတ်၊ ကရုဏာထားတတ်၊ ကူညီတတ်၊ ကျေးဇူးသိတတ်၊ တင်းတိမ်ရောင့်ရဲတတ်၊ ချစ်ခင်တတ်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
ပျံသန်းနိုင်တဲ့အချိန်မှာ ပျံသန်းခြင်းကို လက်မလွှတ်ပါနဲ့။
အိပ်မက် မက်နိုင်တဲ့အချိန်မှာ အိပ်မက်ကို လက်မလွှတ်ပါနဲ့။
ဒီနေ့ကို လက်လွှတ်ရင် မနက်ဖြန် ပြန်ရမယ်လေ။
Gtalk အတွေးစာသားများစုစည်းမှု (၁၂)
မင်းနဲ့ငါ ညှိလို့မရ၊ ရည်းစားသစ်ရှိလို့လား။
အပြင်သွားရင် သတိနဲ့သွား သတိနဲ့လာပြီး သတိနဲ့စား
သေမလောက်ချစ်တာ သိရဲ့လား ........။
ချစ်သူတစ်ယောက် သိမှသိပါလေစကွယ် .........။
သိမ်းထားတတ်သူအတွက် အလွမ်းများသာ ဖြစ်သည်။
မနိုင်မနင်း "က" လို့.....။
အခုလောလောဆယ် ဖရောင်းတိုင် တီထွင်ခဲ့သူကို ကျေးဇူးတွေ တင်နေရပါတယ်။
ကိုယ့်ကို နားလည်တဲ့လူတစ်ယောက်ကို ရှာဖို့
ကိုယ်က သူ့နားလည်နိုင်တဲ့လူဖြစ်အောင် အရင်ဆုံး လုပ်ရလိမ့်မယ်။
ချစ်နေတာက (၁) ယောက်၊
ကြိုက်နေတာက (၂) ယောက်၊
အိပ်မက်ထဲမှာက (၃) ယောက်၊
ကျူနေတာက (၁၀) ယောက်၊
ဒါပေမယ့် ဘယ်သူမေးမေး (မရှိဘူး)ပဲ....။
လောကကြီးမှာ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးက မိမိချစ်သူ၏ လိမ်ညာခြင်းကို ခံရသည့်အချိန် ဖြစ်သည်။
ထိုအချိန်တွင် အမုန်းသင့်ဆုံးသူသည် အညာခံရသော မိမိကိုယ်တိုင်ပင် ဖြစ်သည်။
နင်လေ... သတိရရင် ဖုန်းဆက်ပါအချိန်တိုင်း။
Gtalk အတွေးစာသားများစုစည်းမှု (၁၁)
အာဒမ်က ရွေးစရာမရှိလို့ ဧ၀ကိုချစ်တာပါ...
ငါက ရွေးစရာတွေ အများကြီးထဲက နင့်ကို ချစ်တာပါ...။
E-mail စာများ ရောက်မလာခဲ့ရင်
မ ကိုလေ မငြိုငြင်ပါနဲ့နော်
မ တို့ မိန်းမသားဘ၀မှာ online တက်နိုင်ဖို့ရာ
connection ကောင်းဖို့ ဆုတောင်းနေရတာ။
ဘယ်တိရစ္ဆာန်မှ အွန်လိုင်း မတက်ဘူး....။
အ 8 ကို
10 ကမ္ဘာတိုင်အောင် ချစ်သွားမှာပါ....။
ဟဲ.. ဟဲ.... မှားမှာစိုးလို့။
မေ မ-chat မေသာငတ် မေ့နေရာ လူမလပ်၊
မောင် မ-chat မောင်သာငတ် မောင့်နေရာ လူမလပ်၊
ထာဝရထက် မင်းကိုငါ တစ်ရက်ပိုချစ်တယ်။
ဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် နင့်ကိုငါ လွမ်းတယ်။
(မှတ်ချက် - အပေါ်က စာသားတွေရဲ့ဘေးမှာ တင်ထားတဲ့ပုံက ဘီယာခွက်နဲ့ ဘီယာဘူးပုံ ဖြစ်ပါသည်)
ဘေးနားမှာ ချစ်ရမယ့်လူ မရှိတော့တဲ့ အချိန်ကျမှ
နီးနီးလေးနဲ့ ဝေး နေရတယ်နော်။
လမ်းဆုံ မှာ ရပ်နေတဲ့အခါ
သံယောဇဉ် ကို ဖြတ်ကြရဦးမယ်။
ပျော်ရွှင်ခြင်းနိုင်ငံ ကို အတူသွားချင်ပေမယ့်
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့အတူ
တကယ်ဆိုရင် အချစ်ပဲလိုတယ် ဆိုပေမယ့်
လမင်းနဲ့ ပင်လယ် ပါ။
Gtalk အတွေးစာသားများစုစည်းမှု (၁၀)
where never you do ..
I wait you right here waiting for you .....!
All actions you do on everything is your morality.
လူတစ်ယောက်မှာ နှလုံးသားဆိုတာ တစ်ခုပဲရှိတယ်၊
ကုန်ဈေးနှုန်းလေးများ အဲဒီလို ကျလိုက်ပါလားကွယ်။
ှငါ့ထက် ခွင့်လွှတ်တတ်သူကို တွေ့ခဲ့ရင်
ငါ့ထက် တမ်းတတတ်သူနဲ့ ဆုံမိခဲ့ရင်
ငါ့ထက် သံယောဇဉ်ကြီးသူကို ခလုတ်တိုက်မိခဲ့ရင်
ဘယ်တံတားနဲ့ ဆက်သွယ်ရမလဲလို့ တွေးနေမိတယ်။
လိပ်လိုနှေးတဲ့ အင်တာနက်ကိုစီးပြီး ကမ္ဘာ့ရွာကိုပတ်နေရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မင်းဆီအရောက် နောက်ကျနေခဲ့ရင် နားလည်ပေးပါနော်။
(၄)မေတ္တာ - မတွေ့ရလည်း နေနိုင်သည်။ အေးငြိမ်းချမ်းသာ၏။
(၉)မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတော့မယ်လို့ ခံစားရတဲ့အချိန်တိုင်း ဆန္ဒတွေက နောက်ဆုတ်သွားတတ်ပါတယ်။
(၁၅)သဗ္ဗေသတ္တာ ကမ္မသကာ -
Gtalk အတွေးစာသားများစုစည်းမှု (၈)
ဥယျာဉ်မှူးရဲ့ ခိုင်မာတဲ့ သတ္တိပဲ....
ကိုယ်ကပဲ နားလည်မပေးနိုင်လောက်အောင် ညံ့နေတာလား မသိတော့ပါကွယ်...။
အချစ်ဟာ ပန်းတစ်ပွင့်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်....
မနက်ခင်းမှာ နိုးထစေတဲ့ အနမ်းတစ်ပွင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်....
စိတ်အားငယ်ချိန်မှာ မှီခိုနိုင်တဲ့ ပုခုံးတစ်စုံလည်းဖြစ်နိုင်တယ်....
အချစ်ကို ခံစားနားလည်တတ်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်.....။
အသိမေ့လောက်တဲ့... အကြည့်တစ်ချက် လိုချင်တယ်....။
ရှာတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒါပျော်ရွှင်မှု မဟုတ်ပါဘူး။
ပျော်ရွှင်မှုအရေခွံ လွှမ်းခြုံထားတဲ့ အခြားတစ်ခုခုသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒူးထောက်အရှုံးပေးသူက ငါပဲဖြစ်ပါရစေ .....။
စာကမရ Whisky ချ
စိတ်ညစ်တယ်နော် Beer ဆော်
မလောက်သေးပဲ Spy ထပ်ဆွဲ
စက်တော်ခေါ်ရန် Brandy ခံ
မနက်လင်းသော် Ice ထပ်ဆော်
ကြံရာမရ Rum ထပ်ချ
ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် Black Label ကစ်...။
ကိုယ်က ချစ်နေခွင့်ရဖို့ပဲ လိုတာပါ။
သူ့ကိုချစ်နေသမျှ ကိုယ့်ရင်ထဲမှာလည်း အချစ်ဆိုတာ ကိန်းဝပ်တည်နေမှာပဲ မဟုတ်လား။
Gtalk အတွေးစာသားများ စုစည်းမှု (၇)
ပျော်ရွှင်မှုတွေ ဆိတ်သုန်းသွားတယ် ...။
ထီကြီးပေါက်ဖို့ ရည်စူးရွယ်ကာ ဘုရားကိုတက်.....
ကန်ဘောင်မှာ တူတူထိုင်ကာ ၃လုံးကိုတွက်......
ကိုယ် လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အလုပ်ကို တစ်ဘက်လူက
ကျေနပ်နှစ်သက်မှု အပြည့်အ၀ရှိရဲ့လား ဆိုတာကိုတော့
ဆုံလာချိန် ခဏလေးထဲ မငြိုငြင်ရက်ဘူးကွယ်
ကိုယ်နိုင်သလောက် အလျှော့ပေး ချစ်ချင်တယ်....။
ဒဏ်ရာ အကြီးအသေးပေါ်မှာ မူမတည်ပါဘူး။
ဘယ်လောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသလဲဆိုတဲ့ အပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်.....။
သင့်ဖက်ကသာ အစစ်အမှန်တွေကို ပေးမယ်ဆိုရင်....
ကံတရားကလဲ သင့်ကို ချန်ထားမှာမဟုတ်ပါဘူး.....။
မကျေနပ်လို့ တိုင်လိုက်ရင် နတ်ကိုင်လိမ့်မယ်။
Gtalk အတွေးစာသားများ စုစည်းမှု (၆)
နီးခြင်း၊ ဝေးခြင်းနှင့် လုံးဝ မသက်ဆိုင်ပါ။
ချစ်နေဖို့၊ သစ္စာရှိဖို့ကသာ အဓိကဖြစ်ပါသည်။
I Live in တဲစုတ်.
I only eat ပဲပြုတ်.
I walk in လမ်းစုတ်.
So I meet မိပုတ်.
I give her အမှိုတ်ထုတ်.
So she beat me with ထီးစုတ်.
And I run in တောအုပ်.
I play with ကျားစုတ်.
Now I work ၀ဲကုတ်.
So my skin is ပြဲစုတ်.
And I go to doctor ရမ်းတုတ်.
This message read မျောက်ရုပ်......
(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶ ٩(͡๏̯͡๏)۶ ٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)
Friendship with Charming Boys;
Contact with Intelligent Boys;
Flirt with Freaky Boys;
Marriage with the Rich Boy....
Gtalk အတွေးစာသားများ စုစည်းမှု (၅)
မိုးပေါ်က လမင်းကြီးနဲ့ ကိုယ့်အဖြစ်ကတူပါတယ်
အချစ်စစ်နဲ့ ချစ်မယ့်သူ ဘယ်တော့မှ တွေ့ပါ့မလဲနော်။
အချစ်ဆိုတာ... ပေးဆပ်ခြင်းလို့ သတ်မှတ်ချင်လည်း ရပေမယ့်...
အလွမ်းဆိုတာကတော့.... ခံစားရသူကို သေစေနိုင်တယ်ဆိုတာ ....။
အရာအားလုံးကို ကိုယ်ဖမ်းဆုပ်မိပြီလို့ ထင်နေခဲ့တာ....
ဘယ်chatမှာ ဘယ်လိုကဲမှန်း...... မသိတော့ ခက်လှပြီ............
မနှစ်ကပေးတဲ့ မေးလ်လိပ်စာ...... ဗိုင်းရပ်စ်ကိုက်လို့ ပျက်ကုန်ပြီ..........
နားလည်သိတတ်မှုသာ အရေးကြီးတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်....
အရမ်းခြစ်တတ်သူများ၊ အခြစ်ကျွမ်းကျင်သူများ အလိုရှိသည်။
Gtalk အတွေးစာသားများ စုစည်းမှု (၄)
ဂျီတော့ခ်က စာသားလေးတွေ မတင်သေးဘူးလားလို့ ခဏခဏမေးနေကြတဲ့ မိတ်ဆွေတွေအတွက် ထပ်မံစုစည်းလို့ ရသမျှကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ဖတ်ဖူးပြီးရင်လည်း ထပ်ဖတ်လိုက်ပေါ့ဗျာ။ ခင်ဗျားရေးထားတဲ့ စာသားတွေပါနေရင်လည်း မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီးသာ ဖတ်လိုက်။း)
မြန်မာပြည်သည် အလွန်ပျော်စရာကောင်းသော နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်း ကောင်းလျှင်လည်း ပျော်ရသည်။
Money grows on tree.
(လိုက်ဆို... အကြိမ် ၃၀၀၀၊ ကျွန်န်ုပ်တို့သည် မြန်မာပြည်တွင်နေသည့် မြန်မာများပီပီ... မြန်မာပြည်အင်တာနက်ကို သည်းခံ၍သုံးစွဲပါမည်)
မျှော်နေသူမောလှပါတယ်။ ဘာမှာလဲ ချစ်တဲ့သူရယ်... အမြဲတမ်းစောင့်နေတယ်... မင်းသိရဲ့လား။
ဘယ်သူ့ကြောင့်လဲတော့ မသိဘူး။ ပျက်တော့ပျက်နေပြီ။
အချို့က ချစ်လျက်နဲ့ ကွဲကြတယ်... ဒါပေမယ့်.... မုသားတွေပါတယ် ...။
အချို့က ကွဲလျက်နဲ့ ချစ်ကြတယ်... ဒါပေမယ့်.... မာနတွေပါတယ် ....။
အချို့က ဝေးလျက်နဲ့ နားလည်ကြတယ်... ဒါပေမယ့်.... အချစ်ဆိုတာပါတယ် ...။
Gtalk အတွေးစာသားများ စုစည်းမှု (၃)
ဒီစောက်ချိုးမျိုး လာချိုးလို့ကတော့ အရမ်းသနားတယ်...
ယောင့်တက်ရင် ဘာဖြစ်တတ်သလဲဆိုတာ မင်းရှေ့က စီနီယာတွေ သွားမေးကြည့်။
တကယ်ပါ ကောင်လေးရာ ငါမပစ်ခဲ့ပါဘူး။
လေးကြိုးကို ငင်ကြည့်ရင်း လွတ်ထွက်သွားတာပါ။
တကယ်ပါ ကောင်လေးရာ ကြုံကြိုက်တုန်း ခြွေချခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။
ရင်တစ်ခုလုံး ပွင့်ထွက်မတတ် ချစ်ခဲ့တာပါ... တကယ်ပါ....။
လေပြည်တွေ တိုက်နေတာတောင် ပိုပြီး နှလုံးခုန်နှုန်းမြန်နေခဲ့ရင်
တစ်နေ့မှာ ချစ်သူရဲ့ ယုယမှုတွေက သေစေနိုင်လောက်အောင် ချစ်တတ်မှုကို သင်ပေးမလား မသိဘူးနော်။
ကောင်းကင်က ကြယ်တွေကြွေတိုင်းသာ မင်းရဲ့ ဆုတောင်းတွေပြည့်မယ်ဆိုရင်
မင်းဆုတောင်းတွေ အမြဲပြည့်နေဖို့အတွက် မကြာခဏ ကြွေပေးနေမယ့်ကြယ်တွေ ငါဖြစ်ပါရစေ.....။
တစ်နေကုန် Chatting ၀င်....
အချိန်ရသမျှ Gtalk ပြော....
Monitor နဲ့မျက်နှာ ခွါတယ်မရှိတော့....
ခင်ရုံပါဆိုရင် ရင်ခုန်စရာ ဘာလို့တွေးတာလဲ...?
ရိုးရိုးသိတာပါဆိုလည်း ခိုးခိုးကြည့်စရာ မလိုပါဘူး...
ဖုံးဖိနေပေမယ့် အပြုံး၊ အကြည့်တွေက သိသာတယ်နော်...
အခင်မပိုသေးရင်လည်း အရင်လိုလေးပဲ ဆက်ဆံပေါ့...
ရည်စားမရှိရင် Q သာ Q ....း-).
u see i see တော့ ဒန်း ကျိုးတာပေါ့
u say i say တော့ ပန်းကန် ပါးတာပေါ့
u no i no တော့ နှစ်ယောက်လုံး အိပ်ရေး ပျက်တာပေါ့း)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူကြီးသား ဖြစ်ပါရစေ အရှင်ဘုရား... :P
မိန်းကလေး/ကောင်ကလေး များသည် အမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲတတ်သည်တဲ့...
Fight ဖို့ Case မပါဘူး
လိုက်လို့ ညစ်ရင်လည်း မမိုက်လို့ ပစ်တယ်မှတ်လိုက်မယ်
But သင့်အတွက် မှတ်ရန်က အချစ်အတွက် မနက်ဖြန်မရှိပါတဲ့။
Zoo ထဲက ဆင်ass ကို ပင်အပ်နဲ့ ထိုးရထိုးရ...
တောထဲက ခြင်္သေ့ကို လောက်စာလုံးနဲ့ ဆော်ရဆော်ရ...
Mr. Bush ကို ဒီမှာငချွတ် မင်းဟာဖွတ်လို့ ပြောရပြောရ...
အသက်မရှူ ပါးစပ်မကူဘဲ စက္ကန့်ဝက်နေဆို နေပါ့မယ်ဟာ... နော်.... :P
အဲဒါနဲ့... အမေရိကန်နဲ့ ကိုရီးယား စာချုပ် ချုပ်လိုက်တာ...
အသက်အစိတ် ပုခက်ချိတ်ရန် ကြိုးစားနေသည်။
ချစ်လိုက်မုန်းလိုက် as you like
Without any စောက်ဂရုမစိုက်
Just God Can Stop Me.
အတိတ်ကမင်းအတွက် အဓိပ္ပါယ် တချို့တ၀က်ရှိခဲ့ရင်
ကျောင်းဖွင့်တိုင်း မင်းမျက်နှာ ငါနေ့တိုင်းမြင်ချင်မိ။
Life is like the movies,
We produce our own show.
မိန်းမတွေကို မုန်းတယ်း)
ဖားတစ်ကောင်နဲ့ ခရုတစ်ကောင် လက်ဆောင်ပေးလိုက်ချင်တယ်။
မှန်ပေမယ့်လည်း ယဉ်ကျေးဖွယ်ရာ ကင်းတတ်တယ်။
ယုံကြည်မှုနဲ့ ချစ်ခဲ့တဲ့ အချစ်ကို
မင်းကို ထာဝရ မုန်းသွားမှာပါချစ်သူ…။
တစ်ခါ Hi ၁၀၀ ကျပ်။ နာမည်မေးလျှင် ၂၀၀ ကျပ်။ လိပ်စာပါသိချင်လျှင် ၅၀၀ ကျပ်။ အသည်းကွဲ၍လာတိုင်ပင်လျှင် ၁၀၀၀ ကျပ်။ ဟိုမေးဒီမေး ၅၀၀၀ ကျပ်။ စစနောက်ပြောင် ၁၀၀၀၀ ကျပ်။ ရည်းစားစကားပြောလျှင် FREE.. :P
Posted by lonemange at 7:02 AM
နိုင်ငံခြား ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းသစ်တွေကို ဒေါင်းပီးကြည...
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါဆိုတာ ဘာလဲ